ओठमा चुम्बन गर्न र रोमान्टिक समय साट्नका लागि सबै भन्दा उत्तम कहिलेत हेर्नुहोस् - Babal Khabar
हामीकहाँ खुलमखुला चुम्बन गर्नु त्यती शोभनिय मानिदैन । भनिन्छ, ‘छ्या कस्तो लाजमर्दो !’ जबकी चुम्बनलाई प्रेम अभिव्यक्तको माध्याम मानिन्छ । खासगरी रोमान्टिक पल साट्नका लागि अधर चुम्बन गर्ने प्रचलन छ । यो प्रचलन खासगरी पश्चिमी समाजमा छ ।
यद्यपि तर, एक अध्ययन अनुसार चुम्बन गर्ने संस्कार सबैतिर छैन । विश्वको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा पनि कममा मात्र चुम्बन गर्ने प्रचलन छ । जसरी परिचितसँग भेट्नसाथ नमस्कार आदनप्रदान गर्छौं, ठिक उसैगरी पश्चिमाहरु चुम्बन साटासाट गर्छ । अर्थात त्यहाँ सामाजिक सद्भावको एक अभिव्यक्ती मानिन्छ, चुम्बनलाई । साथीभाई, इष्टमित्र, आमाबुवा, छोराछोरी, श्रीमान्-श्रीमतीबीच जो कोहीसँग चुम्बन साटासाट गर्न सकिन्छ । तर, यी सबैभन्दा भिन्न हुन्छ वैंशालु जोडीबीचको चुम्बन ।
प्रेम जोडीहरु चुम्बनलाई एक यस्तो रसायन मान्छन् जसले दुई युवायुवतीलाई एकाकार बनाउँछ । बीबीसी हिन्दी अनलाइनको एक लेखमा उल्लेख छ, ‘जब हामी कसैलाई चुम्बन गर्छौं, तब एक चुम्बनको क्रममा करीब ८ करोड ब्याक्टेरिया आदन-प्रदान हुन्छ । यसमा सबै ब्याक्टेरिया हानी पुर्‍याउने मात्र हुँदैन ।’ चुम्बन गर्नु पश्चिमी समुदायको देन हो, जो एक पिढींबाट अर्को पिढींमा आएको कतिपयको तर्क छ ।
त्यसो त चुम्बन जस्तै कुनै क्रियाको पुरानो उदाहरण हिन्दुको वैदिक संस्कृतिमा पनि पाइन्छ, जो आजभन्दा ३५ सय बर्ष पुरानो हो । त्यसैगरी मिश्रको प्राचिन संस्कृतिमा चुम्बन गर्नुको साटो मानिसहरु एकअर्काको अंगालोमा बाँधिएर नजिक आउँथे । सन् २०१३ मा वलोडारस्कीले चुम्बनको प्रवृत्तिमाथि अध्ययन गरेका थिए । उनले सैयौं व्यक्तिलाई सोधेका थिए कि, चुम्बन गरिरहेको समयमा उनीहरुलाई के कुरा विशेष लाग्छ ?
जवाफबाट थाहा भएको थियो कि, एकअर्काको शरीरको सुगन्धले उनीहरुलाई थप आकषिर्त गर्छ । चुम्बनको क्रममा उनीहरु शरीरको सुगन्ध लिइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा चुम्बन भनेको एकआपसमा नजिक हुने मेलो नै हो । तर, यसको सुरुवात कहिले भयो ? यसबारे भने थाहा हुन सकेको छैन ।
Prevप्रेमलाई मन्दिर बनाउने कि जेल ? ओशोले प्रेमसम्बन्धी दिएका विभिन्न मन्तव्यहरुमा आधारित
nextयसकारण कम उमेरका युवती बढी उमेरका पुरुषतर्फ आकर्षित हुन्छन्